Umkhiqizi kanye neFektri Elikhulu Kakhulu LeCarbide | Toonney
Carbide strip, isicelo kabanzi ngokhuni kanye namatshe ukusebenza. Ukukhethwa kwebanga kubaluleke kakhulu, amamaki anzima angahlala impilo ende, kepha-ke, ibanga elithambile livame kakhulu lapho isimo semishini noma sokushisela singekho kahle kangako.
Carbide strip, isicelo kabanzi ngokhuni kanye namatshe ukusebenza. Ukukhethwa kwebanga kubaluleke kakhulu, amamaki anzima angahlala impilo ende, kepha-ke, ibanga elithambile livame kakhulu lapho isimo semishini noma sokushisela singekho kahle kangako. Sithuthukise amamaki ngobulukhuni obuhlukile besimo esihlukahlukene, njengoba kungezansi
Kwezinye izimo, umugqa we-carbide nawo ungasetshenziswa njengokugaya ukwesekwa komshini, ngenxa yobulukhuni obuphakeme, ukugqoka ukumelana, ukumelana nokugqwala kwe-tungsten carbide. Kulolu hlelo lokusebenza, ubude kungadingeka ukuthi bube ngaphezu kwe-1m, isibonelo, i-1.2m, umugqa omude kunayo yonke esiyenzele ikhasimende ngu-1.5m.
Langaphambilini Carbide Ukuphela Mill
Olandelayo: Izinduku zeCarbide